မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: Free & Easy Korea Trip Day5– (Free Hanbok photo taking, Myeong Dong shopping, Namsangol Hanok village, Cheongyecheong River)
Posted by mabaydar at 11:58 AM
ပျော်စရာ ..ကြည်နူးစရာ လှလှပပ photo တွေနဲ့ .. နောက်ဆုံးပိတ် ပုံကတော့ သိပ်နောက်ကျသွားတယ် သတိပေးထှာ :P :P
ဒါပေမယ့် ရုံးမှာ ထမင်းစားပြီးကာစ ဆိုတော့ အရမ်းအသုံးဝင်သွား ဒယ် (မက်လုံးပြူးသွားတယ် ညလေး) :) :)
ဟီး... ဟီး.... ကျေးဇူးပါ အစ်မရေ....
12/10/2014 12:51 PM
တစိမ့်စိမ့်ဖတ်နေရင်းက ၀ုန်းဆို ကိုရီးယား သွားချင်စိတ်တောင်ပေါက်တယ် အစ်မရေ
အစ်မရေးထားတာတွေ ဖတ်လို့ အရမ်းကောင်းတယ်.
၀ုန်းဆိုပြီးတော့ သွားချင်စိတ်ပေါက်လောက်အောင်ပဲလား.... ၀ုန်းဆိုလို့ လန့်သွားတာ... ဟီး... ကွန်မန့်အတွက် ကျေးဇူးနော်...
12/10/2014 5:17 PM
ဟုတ်တယ်။ ကိုယ်တို့ M plaza ကိုရှာတုန်းကလဲ လမ်းမကြီးအတိုင်းရှာနေတာနဲ့ ကျော်သွားသေးတယ်။ နောက်မှလမ်းဘေးက လမ်းညွန်ဆိုင်းဘုတ်ကို တွေ့မှ မှားမှန်းသိလို့ ပြန်လှဲ့လာတာ။ တခါတလေ website မှာပြောထားတဲ့ လမ်းညွန်တွေက နဲနဲ လွှဲနေတတ်တယ်။ ကိုရီးယားမှာ ကိုယ်တို့တခု မထင်မိ တာက လူတော်တော်များများ (လမ်းဘေး ဈေးသည်ကအစ) English လိုသာ မပြောတတ်ရင်ရှိမယ်။ တရုတ်လို နဲနဲ ဖြစ်ဖြစ် ပြော တတ်ကြတယ်။(ကိုယ်တို့ အတွက်တော့ အတော်အဆင်ပြေတယ်)။ မဗေဒါလိုပဲ ကိုယ်တို့လဲ ရောက် ရောက်ချင်း ဟိုက လူ(အထူးသဖြစ် မိန်းခလေး)တွေ နဲ့ မျက်နာတွေက ဆင်ဆင်လေးတွေလို့ ခံစားရတယ်။ နောက် တရက် နှစ်ရက်လောက်မှ နဲနဲကြည့်ရတာ နေသားကျသွားတာ။ ဆယ်ဂျုံး ဘုရင်နဲ့ စစ်သူကြီး ရုတ်ထုကို Cheongyecheong ချောင်းသွားတုန်းက သွားဖို့ စိတ်ကူးသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ နဲနဲ မှောင်လာတာကြောင့်ရော၊ လူကပင်ပန်း နေတာ ကြောင့်ရော မသွားဖြစ်လိုက်ဘူး။
အရင်အပိုင်းတွေထဲက မဗေဒါခရီးသွားပို့စ်တွေကို ကြိုက်ကိုကြိုက်လို့ဖတ်လာတာ နောက်ဆုံးပိုင်းနားရောက်မှပဲ ကိုရီးယားသွားချင်စိတ်ပေါ်လာတယ် ရှော့ပင်းကဆွဲဆောင်သွားတာထင်တယ် ကိုရီးယားကလူတွေက ဖြူဖြူချောချောချစ်စရာကောင်းမှအရေးလုပ်တယ်ဆိုတော့ သွားရမှာခပ်ကြောက်ကြောက်ပဲ ရန်ကုန်မှာလဲအဲလိုမျိုးနဲနဲတော့ရှိတယ်လေ မြန်မာတွေက အသားဖြူမှလှတယ်ထင်တာတို့ဘာတို့ အာ့ကြောင့်ဝိုင်းလဲဒီမှာမြဲနေတာထင်တယ် မြန်မာပြည်မှာဆို ကိုယ်ကကလန်ကလား ဝတယ်လဲပြောခံရဦးမယ် အသားလဲမဲတယ်ဆိုပြီး ဒီမှာတော့ ကိုယ်တွေအသားကိုမှ ညိုညိုလေးလှတယ်ထင်ကြတာ အရပ်ကလဲအနေတော်လောက်ပဲ ပိန်တယ်လို့တောင်လာပြောကြသေးတယ် ကောင်းလေစွ တခါတလေ အရေပြားတထောက်ကို အရမ်း judge လုပ်လွန်းတဲ့ အရှေ့တိုင်းသဘာဝကိုစိတ်ကုန်မိတယ် စကားမစပ် ဓာတ်ပုံတွေအရမ်းလှတယ် ဒီမှာ .. မဗေဒါနဲ့ အဲ့ဘလေဇာလက်အမြင့်လေးနဲ့ အရမ်းလိုက်တယ်တော့
၂၀၀၉ တုန်းက သွားတုန်းက ဂိုက်ကတော့ပြောတယ် တရုတ်စကားက ကိုရီးယားမှာ ဒုတိယဘာသာစကားတဲ့... ကိုယ်တွေလဲ အင်္ဂလိပ်လို နားမလည်ရင်တော့ တရုတ်လို ရသလောက်ပြောရတာပေါ့... ဆောင်နာတုန်းကလိုပေါ့... Cheongyecheong နဲ့ ရုပ်ထုတွေနဲ့က နီးနီးလေးကို သွားခဲ့တာဟုတ်ဘူး... ဒါပေမဲ့ ရုပ်ထုက ရုပ်ထုပဲ သိပ်စိတ်မ၀င်စားရင်တော့လဲ လွတ်သွားတာ ကိစ္စမရှိပါဘူး...
Wine က ၀တယ်ဆိုတော့ မဗေဒါဆို ဘုတ်အီးဖြစ်နေပြီ ပြောရတော့မယ်ထင်တယ်.... ၀ိုင်း body မျိုးရရင် ကျေနပ်ပြီ... အသားအရည် ခွဲခြားတာ အာရှက ပိုဆိုးတယ်... မဗေဒါလဲ အနောက်တိုင်းပြောင်းနေမှထင်တယ်... ဆန်းပိုပွင့်မလားလို့... ခိခိ....
ခရီးသွားပို့စ်လေး ရေးထားတာ ကိုယ့်အတွက် အရမ်းအသုံးဝင်တာပဲ။ ၀တ်ထားတဲ့ ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းတွေကလဲ လှမှလှ ပဲ။ ကျေးဇူးပါ။
12/11/2014 11:29 PM
ဟီး... ဖေ့ဘွတ်မှာ ရေးထားတာတွေ့ပြီး သနားသွားလို့ ကွန်မန့် ပေးသွားတာလား? ... မဗေဒါရေးပြီးတဲ့ နေရာတွေ သွားဖြစ်တာတွေ ရှိလား? ဖက်ရှင်က သိပ်မသိပါဘူး... ဒီလိုပဲ ရှိတာ ၀တ်ရတာ... လူက ၀တော့ အ၀တ်အစားက ရွေးသေးတာ... :(
ထိုက်ထိုက်တန်တန်ပို့စ်လေးကို ဖတ်ခွင့်ရခဲ့လို့ ကျေးဇူပါ မဗေဒါရေ.... ရခဲပေခြင်းအတွေ့အကြုံတွေ။
12/14/2014 5:59 PM